Ibidda Magaalaa Los Anjelesitti babal’ataa dhufe hordofuun Donaald Traamp labsii yeroo muddamaa baase. - NuuralHudaa
Ibidda Magaalaa Los Anjelesitti babal’ataa dhufe hordofuun Donaald Traamp labsii yeroo muddamaa baase.
Ameerikaa Kutaa Kaalifoorniyaatti ibiddi bosonatti eegaa qabate guyyaa 5 gahee jira. Balaa ibidda kanaatiin lammiileen 200,000 ol qehee isaanii irraa buqqa’aniiru. Gaamoowwan 500 ol immoo ibidda kanaan barabadaa’aniiru.
Ibidda kana dhaamsuuf tattaaffiin cimaan godhamaa jiraatus, humna ol tahuudhaan amma magaalaa Loos Anjelees dhaqqabee jira. Kanuma hordofuun Prezadant Traamp guyyaa hardhaa magaalaa Los Anjeleesitti, labsii yeroo muddamaa labsuu odeeyfannoon Aljaaziiraa irraa arganne ni addeessa.
May 16, 2022 sa;aa 9:10 pm Update tahe